Imba - Yazvino Chikoro Nhau: Yazvino Chikoro Nhau
Facebook Scholarship yeNigerian Vadzidzi 2021/2022 Portal Kwidziridzo
Facebook Scholarship yeVadzidzi veNigerian: Facebook ndeimwe yemaforamu enhau anonyanya kufambidzana apo vanhu vanosangana nevanoziva / vangangoda kuziva. Nekudaro, kunze kwekunge uri chikuva chekutaura, iri zvakare chikuva chekushambadzira mabhizinesi. Zvakare, iri zvakare chikuva chinopa muromo-unodiridza kudzidza kune vadzidzi. Zvinonzwika zvinoshamisa, handizvo? Hongu ye […]
Scholarship yekudzidza Abroad kune Vadzidzi veNigerian 2021 Chinyorwa Chinyorwa
Scholarship yekudzidza Abroad kune Vadzidzi veNigerian: Unoziva here kuti pane mabhenefiti ane hukama nekuve wekuNigeria? Uye kuti mamwe emabhenefiti aya anoratidza zvechikoro muchimiro chehunyanzvi hwekudzidza kunze kwenyika? Iwe unofanirwa kuziva izvi. Zvakare, aya mabhezari akanyatsogadzirirwa kusangana nezvinodiwa zvemari zvevadzidzi veNigerian. Zvisinei, kunyange izvi […]
Target Scholarship Kunyorera Portal makoolarfunds.org 2021 Kwidziridzo
Target Scholarship Kunyorera: Iyo Target Corporation inopa huwandu hwedzidzo uye inopa mikana kune vadzidzi. Zvisinei, vadzidzi vanofanira kusangana nekodzero yekufanirwa. Pamusoro pezvo, iyo Target kudzidza vanobatirana nemamwe masangano kugadzira mimwe mibairo yemari. Nekudaro, vadzidzi vanogona kuwana aya mabhezari pamhepo pasina muripo. Nekudaro, kuziva zvakawanda nezve iyi fundo uye kukodzera kwayo […]
Microsoft Akaremara Scholarship 2021/2022 Kunyorera Portal Kwidziridzo
Microsoft Disability Scholarship: Iyi fundo ndeyekufundira yakagadzirirwa kubatsira avo vakaremara. Nekudaro, kana iwe uine chero fomu yehurema iwe unofanirwa kutora urwu ruzivo zvakanyanya. Verenga kuburikidza nechinyorwa ichi kuti udzidze zvakawanda nezve iyi Microsoft hurema hwekufunda. Vimba neni, iwe uchafara kuti iwe wakazviita. Zvinangwa zveMicrosoft Disability Scholarship […]
Yakanyatsobhadharwa Scholarship 2021 yeVadzidzi Vepasi Pose Fomu Portal
Yakanyanya Kubhadharwa Scholarship: Semudzidzi wepasi rese pane zvakawanda zveufunda iwe zvaunogona kuwana kubva. Nekudaro, zvese zvaunoda kuti uite kusangana nezvinodiwa uye nekushandisa. Muchikamu chino iwe unowana ruzivo nezve zvimwe zvezvinyorwa izvi. Zvakare, iwe uverenge nezvekuti ungawana sei uye kupi. Saka, iva […]
Pamhepo MPH Scholarship Yenyika Dziri Kubudirira: Iwe unoshuva here kuwana yeBritish Masters muSainzi muHuzhinji Hutano kubva kuYunivhesiti yeSuffolk kuburikidza neUNICAF? Kana hongu, saka kudzidza uku ndekwewe. Zvakare, iyi dzidziso inovavarira kupa rubatsiro rwemari kune iyo hope dzako. Zvisinei, zvakakosha kuti utarise kune […]
Harvard University kudzidza 2021: Iwe uri mudzidzi unotarisira kudzidza muHarvard? Iwe unoshuvira here kuti kudzidza kuti udzidze muHarvard? Kana, Harvard chikoro chako chekurota asi iwe haugone kuchikwanisa? Ndine ruzivo runogona kukufadza. Iyo Harvard University kudzidza kwe2021 yakavhurika. Ichi chinyorwa chinokupa iwe […]
ICCR Scholarshipi yeBangladeshi Vadzidzi 2021/2022 Portal Dzidzo
ICCR Scholarshipi yeBangladesh Vadzidzi: Hechino chimwe chinhu chinonakidza chevadzidzi veBangladeshi. Iko kune kudzidza kwako. Izvi zvinopihwa neIndia Council yeCultural Relations (ICCR). Verenga pasi zvakanyatsonaka kuti uwane zvizere ruzivo. Vadzidzi veBangladesh vanogona kunyorera ICCR Scholarship 2021. Izvi zvinyorwa zvinokupa iwe ruzivo rwakakosha iwe rwaunoda kuziva. […]
Apple WWDC Scholarship 2021/2022 Ona Kunyorera Gadziriso Portal
Apple WWDC Scholarship: Senzira yekutenda vatengi vake, Apple iri kupa kudzidza kuvadzidzi. Zvakare, iyi dzidziso ndeyekubatsira vadzidzi vane dambudziko remari kuenderera mberi nedzidzo. Zvakare, zvinotarisirwawo mukuvaka kugona uye kusimudzira hunyanzvi hwevanhu. Saka nekudaro, zvakakosha kuti uzviedze. Hamuna chinhu ku […]
Commonwealth Scholarship yeNigerian Vadzidzi 2021 Kunyorera Portal
Commonwealth Scholarship yeNigerian Vadzidzi: Semudzidzi werudzi rweCommonwealth pane mikana yekufunda iwe yaunogona kubatsirwa nayo. Nekudaro, semudzidzi weNigerian (nyika yeCommonwealth), unogona kubatsirwa kubva kune iyi masomo zvakare. Nekudaro, kunyange paine zvinodiwa, chinyorwa ichi chinokupa iwe chakakosha ruzivo rwekuti ungaisa sei mamwe acho. […]
Haryana Scholarship 2021/2022 Kunyorera Portal haryana.gov.in
Semudzidzi kubva kuHaryana nyika Haryana kudzidza 2021 iri pano kwauri. Iko yemahara uye yakapihwa rubatsiro dzidzo mukana. Iyo Haryana Scholarship 2021 mukana wakanaka kwauri. Ndokumbira utarise ruzivo rwakakosha urwu. Haryana nyika yakapa huwandu hwakanaka hwedzidzo. Ivo vanovhara iyo 2021/2022 chikamu chedzidzo. Munyaya ino […]
7 Zvakanakisa Ndiri Kuda Kudzidza Kunze Kwenyika Mahara Scholarship 2021/2022 Portal
Ndiri Kuda Kudzidza Kune Dzimwe Nyika Kune Mahara Scholarship: Kudzidza kunze kwenyika kwave kuri kurota kwevadzidzi vazhinji. Nekudaro, iyo yakakwira mutengo wechikoro unowanzo funga iyi kurota. Asi ko kana akakuudza kuti pane nzira? Zvakare, ko kana ukakuudza kuti kuchine tariro yekudzidza kunze kwenyika mahara, ungatenda here? Ndibvumire […]
17 Yakanakisa zvizere Inobhadharwa Injiniya Scholarship 2021/2022 Portal Dzidzo
17 akanakisa akazara-anotsigirwa neinjiniya masomo: Dzidzo uye ruzivo rwavanoti isimba. Chinhu chakanaka chatinenge tichikurukura zvese muchinyorwa chino. Muchikamu chino, pane chidimbu cheruzivo rwakakosha nezve mamwe akazara-anobhadharwa mari yeinjiniya masomo. Nekudaro, kana iwe wanga uchitsvaga mabhezari akagadzirirwa vadzidzi veinjiniya, ndapota verenga. 17 Zvakanakisisa […]
Kudzidza muGerman Zvizere Zvakabhadharwa Scholarship 2021 Kunyorera Fomu Portal
Kudzidza muGerman Zvizere Zvakabhadharwa Scholarship: MuGerman, dzidzo inoitwa nyore. Kune masomo anoita kuti izvi zvikwanisike. Zvakare, zvimwe zvezvikoro izvi zvinouya nemapakeji anoshamisa. Nekudaro, kana iwe uchida kudzidza zvakawanda nezve izvi masomo, teerera kune iro ruzivo mune ino chinyorwa. Muchikamu chino, iwe unodzidza kuti kupi / maitiro ekushandisa […]
Scholarship Kubva paSAT Zvikoro 2021/2022 Kunyorera Portal Kwidziridzo
Scholarships zvichibva paSAT Score: Semudzidzi ari kutsvaga kudzidza, ndapota teerera kumusoro. Iko kune masomo iwe aunogona kuwana zvichibva pane yako SAT mamaki. Mukuronga mazwi, aya masifundi anoda kuti iwe uve neimwe SAT mamaki Nekudaro, pane chikonzero chekuchengeta iyo SAT mamaki uye akanakisa. Kana uchida kunzwa zvakawanda, […]
VATARIRI & MIKANA
Fenix ​​Yepasi Pose Yakasarudzika Musarudzo 2021/2022 PDF Chinyorwa Chirodha pasi
Fenix ​​Yepasi Pose Yakasarudzika Vanokwikwidza 2021 iri Kunze: Fenix ​​Yenyika Dzekushandira Yakapfupikiswa mazita emumiriri akasunungurwa. Wakanyorera here iyo Fenix ​​International 2021 kunyorera pane yepamutemo peji www.fenixintl.com? Ipapo iwe unogona kunge uri kushamisika kuti ungaongorora sei Fenix ​​International Shortlisted mumiriri 2021. Kwete kunetseka zvese izvo zvirimo zvinogona kuwanikwa mu […]
Akaiswa mukati basa by TMLT Edhisheni musi waJune 18, 2021
Nyorera Izvozvi Kune UNDP Jobho mu Abuja 2021: Uri kutsvaga basa muNigeria 2021? Ungade here kushanda kuUNDP? Zvakare, iwe haungave nehanya kana tikakutungamira iwe pamabatiro aungaita kunyorera UNDP mabasa kutora muNigeria nekupfuura? Kana hongu, ramba uchiverenga. United Nations Development Chirongwa […]
Akaiswa mukati basa by Edhiyo Vashandi musi waJune 18, 2021	• 0 Comments
Mikana Yebasa paPricewaterhouseCoopers (PWC) 2021 Dzidzo
Mikana Yekuita paPricewaterhouseCoopers (PWC): PricewaterhouseCooper iri kutora nzvimbo dzinoverengeka dzemabasa. Mumiriri akakodzera anofanirwa kuve neBachelor's Degree mumabasa kana mune dzimwe nzvimbo. PwC inobatsira sangano uye vanhu pachavo kugadzira kukosha kwavari kutsvaga. Tiri netiweki yemafemu munyika zana nemakumi masere neshanu dzine vanhu vanopfuura zana nemakumi masere vakazvipira kuendesa mhando […]
PricewaterhouseCooper (PwC) Kutora kweVakapedza Kudzora Vanobatsira 2021: PricewaterhouseCooper iri kutora Administrative Vanobatsira. Mumiriri akakodzera anofanirwa kuve neBachelor's Degree muAccounting, Zvemari, Economics, Statistics, Mutemo kana nemimwe minda inoenderana. PwC inobatsira sangano uye vanhu pachavo kugadzira kukosha kwavari kutsvaga. Tiri network yemafemu munyika zana nemakumi masere neshanu dzine vanhu vanopfuura zviuru zana nemakumi masere […]
PricewaterhouseCooper Kuchengetwa kweMutevedzeri Wemaneja Director: PricewaterhouseCooper irikutsvaga Mutevedzeri Managing Director. Mumiriri akakodzera anofanirwa kuve neashoma makore mashanu echiitiko mune inoremekedzwa Investment Banking femu. PricewaterhouseCooper (PwC) - Mutengi wedu mubazi reInvestment Banking ari kutsvaga kuzadza basa riri pazasi: Musoro weJob
Akaiswa mukati basa by TMLTStaff musi waJune 18, 2021	• 0 Comments
Nyorera izvozvi kune veJunior Economists (Yemukati Firm Service) 2021: PricewaterhouseCooper iri kutora Junior Junior Economists. Mumiriri akakodzera anofanirwa kuve neashoma Bachelor's Degree muChirungu, Masvomhu, Zvemagariro Sayenzi kana yeEconomics discipline. PwC mafemu anobatsira masangano uye nevanhu kugadzira kukosha kwavari kutsvaga. Isu tiri network yemafemu mu158 […]
Nyorera Izvozvi Kune Kuenderera Mberi kweKutora kuPricewaterhouseCooper (PwC) 2021: PricewaterhouseCooper iri kutora ma Administrative Vanobatsira. Mumiriri akakodzera anofanirwa kuve neBachelor's Degree mumabasa kana mune dzimwe nzvimbo. PricewaterhouseCooper (PwC) - Yedu Mutengi, iyo ISO 9001: 2008 yakasimbiswa kambani inopa Yekuongorora, Kudzidzisa uye Tambo Kuwana masevhisi kune Oiri neGesi, Marine uye Kuvaka Indasitiri. […]
MBA muRuzivo Technology 2021 Details, Syllabus neMabasa
Iwe unoda here kuwana MBA muRuzivo Technology? Ruzivo rwetekinoroji rwanga rwuri pamwoyo wekutsanangudza zvakare zvinorehwa nekushanda, kushanda nemazvo, kugadzirwa, uye nekupa basa rakakosha. Inodzidzisa vadzidzi maitiro ekumisikidza mapurojekiti uye manejimendi maqembu emapurogiramu. Verenga kuburikidza nerumwe ruzivo. MBA […]
Akaiswa mukati dzidzo by TMLT Edhisheni musi waJune 18, 2021
Satire Essay Mienzaniso 2021 S Nongedzo kune Yakakwana Satire Essay
Haasi ese marondedzero akafanirwa kuve akanyatsonaka uye anorambidza. Dzimwe nguva, zvinyorwa zvinogona kunakidza kuverenga. Rondedzero yekunyengedza ndeimwe yemuenzaniso wakanaka kwazvo wenyaya inonakidza kwazvo. Muchikamu chino, isu tinokutungamira kuburikidza nekunyora yakakwana satire rondedzero; pamwe nekukupa imwe yeakanakisa satire […]
Dambudziko Solution Essay, Ona Nhanho Nhanho Gwara uye Muenzaniso
Dambudziko remhinduro rondedzero inzira inozivikanwa yekunyengetedza. Mune idzi rondedzero, iwe unofanirwa kutsanangura dambudziko, kugonesa muverengi kuti anetse nezve dambudziko, kupa mhinduro, uye gadzirira kubvisa chero zvinopesana. Izvi uye zvimwe zvakawanda senge nhanho-nhanho nongedzo, ini ndichaita mune ino chinyorwa kutsanangura kwauri. Regai […]
Pazasi pane runyorwa rwemabasa akanyanya kubhadhara kune Vakapedza kudzidza muAmerica. Sekureva kweshumo ichangoburwa naGlassdoor.com, vanachiremba nemagweta nzvimbo unit vachiri vepamusoro-nyika vanowana mari. Tichitarisa neizvi, mabasa mune zvekurapa nemutemo zvinoita kunge zvine mari. Tsvaga ruzivo pazasi. Kuumba runyorwa rwayo rweKubhadhara Kwakanakisisa […]
Akaiswa mukati dzidzo by Edhiyo Vashandi musi waJune 18, 2021	• 1 Comment
Kuongorora Nyaya dzeMusoro 2021 Ona Yakagadziridzwa Yakazara Rondedzero
Muchikamu chino iwe uchaona mienzaniso yenyaya dzekuongorora nyaya. Iyi rondedzero inoitirwa kuratidza hunhu hwese hwechimwe chinhu. Chingave chinhu, sevhisi, chigadzirwa, uye nzvimbo. Zvisinei, kungotaura pfungwa yako hakuna kukwana. Munyori anotarisirwa kuti anyatsoongorora nyaya yacho. Iye / iye anofanira […]
Richmond University Kugamuchirwa Mwero uye Kudiwa Kwekugamuchira 2021
Richmond University yekugamuchirwa mwero chidimbu cheruzivo chakaitirwa pamunwe wako kana iwe uchida kunyoresa chero eiRichmond University zvirongwa. Saka verenga zvirimo mune ino peji zvine chitendero kuti uzvishongedze neruzivo rwakakwana. Izvo Zvaunofanira Kuziva Nezve Richmond University University yeRichmond vadzidzi vanogona kuenda vachena […]
ZVIRI PANO CHIKORO Nhau
Unilorin Remedial Portal www.remedial.unilorin.edu.ng/rem_login.php Dzokorora Kwazvino
Unilorin Remedial Portal: Izvi ndezvekuzivisa vese vekare uye vanotarisira vadzidzi kuti iyo University yeIlorin yekugadzirisa portal iri kumusoro uye iri kushanda. Iri peji rinokupa iwe zano pane zvaunotarisira pane portal. Zvakare, zvinokutungamira iwe kuti ungawana sei iyo portal uye kuvandudzwa kana runyorwa rwekugamuchira […]
AAUA Mudzidzi Portal www.aaua.edu.ng/b/student/ Dzazvino Chishandiso Kugadziridza
AAUA Mudzidzi Portal: Chiremera cheAdekunle Ajasin University chakagonesa mudzidzi portal. Uye iyi portal ndeyekuita zviitiko zvedzidzo zvevadzidzi zvive nyore. AAUA ihurumende yehurumende ine uye inoshanda yunivhesiti yeNigerian. Nekudaro, ingo ramba uchiverenga ichi chinyorwa kuti udzidze zvimwe. Asi kutanga, chii chaunoziva nezve Adekunle Ajasin University (AAUA)? […]
OAU Mudzidzi Portal Login www.eportal.oauife.edu.ng/login.php Dzazvino Kuvandudza
OAU Mudzidzi Portal Kupinda: Chiremera cheOAU chakagonesa mudzidzi portal. Uye iyi portal inopa vese vangangove vadzidzi ruzivo nezve maitiro ekubvumidzwa kwenzvimbo. Zvakare, pane ino portal, vadzidzi vatsva nevadzidzi vanodzoka vachapihwa zvinenge zvese zvavanoda kuti vaite kudzidza kwavo kuve nyore uye zvirinani muchikoro. Obafemi Awolowo University (OAU) Obafemi […]
BIU Portal www.biu.edu.ng/ Tarisa Dzazvino Chishandiso Kugadziridza 2021
BIU Portal: Chiremera cheBenson Idahosa University chakagonesa mudzidzi portal. Nekudaro, semudzidzi kana anotarisira mudzidzi wechikoro, urwu ruzivo runofanira kukufadza. Zvakare, muchinyorwa chino, iwe unowana ruzivo nezve maitiro ekuwana iyo BIU portal. Asi kutanga, usati wapinda mune izvo, chii chaunoziva nezve […]
FUNAAB Yevadzidzi 'Portal: Kana iwe uchitsvaga iyo yepamutemo link kuti upinde muYunivhesiti yeZvivakwa Abeokuta portal, saka iwe uri kurudyi peji. Muchikamu chino, iwe uchadzidza nezve iyo FUNAAB mudzidzi portal. Mune iyo portal iwe unogona kuita zviitiko zvakaita se: kutarisa semhedzisiro, kubhadharira mari yechikoro, […]
OFFA Poly Portal: Semudzidzi weOFA polytechnic, iyi ruzivo ichave inonakidza kwauri. Iko kune portal yakanyanya dhizaini yevadzidzi ve OFFA Poly. Mune ino portal, mabasa mazhinji ezvidzidzo anogona kuitwa zviri nyore. Nekudaro, iwe unofanirwa kuverenga kuburikidza nechinyorwa ichi kuti udzidze zvakawanda nezvekuti […]
100+ Anonakidza Mazwi Aungangodaro Aisaziva Aizoita Kuti Useke
Mashoko anosetsa anonakidza kutaura. Paunofunga nezvazvo, mamwe mazwi muChirungu anogona kurira kunge anonakidza. Uye patinoti "zvinonakidza" isu tinoreva chaizvo kusanzwisisika uye wacky. Asi hei, ndizvo zvinoita kuti vafare, handizvo? Anosetsa Mazwi Ichi chiunganidzwa chemashoko anosetsa uye zvarinoreva. Vaise mu […]
Akaiswa mukati Articles by TMLT Edhisheni musi waJune 18, 2021
Maitiro Ekubvisa Makonzo muMba zvinobudirira uye Zvakaringana
Sezvineiwo, zvinhu zvidiki uye zvisina kukosha muhupenyu huno zvinogona kutikonzera matambudziko nematambudziko. Zvinonzwika kunge wry kufunga kuti imwe miniti zvipenyu zvakaita segonzo zvinogona kudhirowa zvakanyanya uye kutarisisa uye zvichikonzera kumutsa kwakanyanya. Vanhu vasingaverengeki vakabvunza mabvisiro emakonzo mu […]
Noa zvinoreva zita, mavambo, mukurumbira uye mamwe mazita akafanana
Kutsvaga zita remazuva ano remwana wako mukomana mukomana? Noa anogona kunge ari iye chaiye sarudzo yako. Ngatitarisei iro Zita raNoa Zita, Mavambo, uye Kuzivikanwa uye kana iri iro zita chairo remwana wako mukomana. Zita rekuti Noa rinonyanya kuve zita rechirume rine mavambo echiHebheru zvinoreva kuti Zororo. Zviri kunyanya […]
BLW Vashandi Portal www.blwstaffportal.org/auth/login/?refr=Lw== Dzokorora
BLW Staff Portal: Uri kuedza kupinda kuBLW Staff Portal? Nzira iri nyore yekuita izvo ndeye kushandisa zviri pamutemo zvinongedzo izvo zvichapihwa pazasi. Isu tinochengeta zvese zvinongedzo zviri zvechizvino nguva dzese. Zvakare, kana iwe uchida kupinda muBLW Staff Portal, saka pane nzira iri nyore kwazvo […]
18 Inonakidza Chokwadi Pamusoro Pangu Icho Munhu wese Waanoda Kuziva
Chokwadi chinonakidza pamusoro pangu: Dai iwe waizo nyora runyorwa rwe "zvinonakidza chokwadi nezvangu," chii chaungasanganise? Ini ndoziva zvazvinoita kana iwe ukakumbirwa kuti utaure zvimwe zvinonakidza chokwadi nezvako. Vazhinji pane dzimwe nguva unovhiringidzika pazvinhu zvaunogona kutaura kuti ugadzire chirevo chako. Mu […]
Maitiro Ekumisikidza Yakabudirira Yekutakura Bhizinesi iyo Inoburitsa Yakanaka purofiti
Yekutakura Bhizinesi: Iwe unoda here kuita mari kutakura vanhu nezvinhu kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe? Kana hongu, chinyorwa ichi chinokutungamira kuti ungatanga sei bhizinesi rekufambisa. Kutanga bhizinesi rekufambisa kunoda kuti iwe usarudze kuti nderudzii rwebhizinesi raunofunga kuumba, iro rinosanganisira kuchovha bhasikoro, sevhisi yetekisi, […]
Kuisa App yeVadzidzisi 2021: 10 Anotyisa Ekumisikidza Mapurogiramu eVadzidzisi
Kubata App yeVadzidzisi: Kukwidzika kwemagetsi matekinoroji kwakanyatso kukonzera kusati kwamboitika kudzidza nekudzidzisa shanduko. Iwo mafoni matekinoroji aparadza miganho, akavhura mikana mitsva yekudzidza, uye, zvakanyanya kukosha, akatambanudza mikana yekudzidza kusanganisa iyo chaiyo nzvimbo. Nezvo izvi zvinouya zvinochinjika pamwe nehunyoro maringe netempo-geographical dynamics yakatenderedza kudzidza. Se […]
Akaiswa mukati Articles by TMLTStaff musi waJune 18, 2021
Iwo emauto eNigeria ndiwo masitendi emauto anoshandiswa neNigerian Mauto Echisimba. Pazasi pane runyorwa rwevose veNigerian Mauto Mauto mune avo akateedzana. Nzvimbo yeuto ine kana kupatsanurwa kuita zvikamu zviviri, Vakatumirwa uye Vasina-kutumwa maofficial. Bazi rega rega rebasa remauto eNigerian ane chiratidzo chakabatana icho chinozivikanwa nacho. […]
Akaiswa mukati Articles by Edhiyo Vashandi musi waJune 18, 2021	• 0 Comments